လက်ရှိဘ၀မှာ မိဘကျေးဇူးကို အကျေဆပ်တဲ့နည်း – Myanmar Magazine
လက်ရှိဘ၀မှာ မိဘကျေးဇူးကို အကျေဆပ်တဲ့နည်း
March 6, 2019 myanmarmagazine	ဗဟုသုတ
မိဘကျေးဇူးဆပ်ခြင်းနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ဘုရား အဆုံးအမကို ပြောကြပြီဆိုရင် ” မိဘကျေးဇူးကို ဘယ်လိုမှ ကျေအောင် မဆပ်နိုင်ဘူး” လို့ လူအများ ပြောလေ့ ရှိကြတယ်။အမှန်က “ကျေအောင် မဆပ်နိုင်ဘူး”လို့ ဟောထားတာ မဟုတ်ပါဘူး။ကျေအောင် ဆပ်ဖို့ မလွယ်ဘူး။
လွယ်လွယ်ဆပ်ရုံနဲ့ ကျေးဇူးမကျေနိုင်ဘူး။သာမန်ဆပ်ရုံနဲ့ ကျေးဇူးမကျေနိင်ဘူး။အထူးဆပ်မှ ကျေးဇူးကျေနိုင်တယ် လို့ ဆိုလိုပါတယ်။မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ ဟောကြားချက်မူရင်းကို နားထောင်ကြည့်ပါ။
ချစ်သား, ချစ်သမီးတို့ ပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ယောက်ရဲ့ ကျေးဇူးကို အလွယ်တကူ ဆပ်ရုံနဲ့ မကျေနိုင်ဘူး။ ကျေအောင် ဆပ်ဖို့ မလွယ်ဘူးလို့ ငါဘုရား ပြောချင်တယ်။ ပုဂ္ဂိုလ် နှစ်ယောက် ဆိုတာ မွေးမိခင်နဲ့ မွေးဖခင် အရင်းအချာကို ပြောတာပါ။
ချစ်သား, ချစ်သမီးတို့ “အမေကို လက်ယာပခုံးမှာတင် , အဖေကို လက်ဝဲ ပခုံးမှာ တင်ပြီး ရာသက်ပန် လုပ်ကျွေး ပြုစုတယ်။ မိဘနှစ်ပါးကို . . .မွှေးပျံ့နေအောင် နံ့သာမျိုးစုံနဲ့ လိမ်းကျံပေးတယ်။အညောင်းပြေအောင် ခြေလက်တွေကို ဆုပ်နှယ်ပေးတယ်။
အေးတဲ့အခါ ရေနွေး , ပူတဲ့အခါ ရေအေးနဲ့ရေချိုး သန့်စင်ပေးတယ်။ပုခုံးထက်မှာ ကျင်ကြီးကျင်ငယ် စွန့်စေတယ်။အဲလောက် ပြုစုလုပ်ကျွေးပေမယ့် မိဘကျေးဇူး အကျေဆပ်ပြီးသား မဖြစ်သေးဘူး။
ချစ်သား, ချစ်သမီးတို့ စကားအကုန်ပြောရမယ်ဆိုရင် စင်္ကြဝတေးမင်း ရာထူးမှာ ထားပြီး ကျေးဇူးဆပ်ဦးတော့ မိဘကျေးဇူးကို ကျေအောင် ဆပ်ရာ မရောက်သေးဘူး။ ချစ်သား , ချစ်သမီးတို့ ဒီလောက်ကျေးဇူးဆပ်ရဲ့သားနဲ့ ဘာလို့ ကျေးဇူး မကျေနိုင်ရတာလဲ ? ဆိုရင်မိဘတွေဟာ သားသမီးတွေအပေါ် သိပ်ကို ကျေးဇူးများကြလို့ပဲ။
သားသမီးတွေကို ကြီးပြင်းရွယ်ရောက် လူလားမြောက်အောင်ဂရုတစိုက် စောင့်ရှောက်ကြ လို့။ နို့ချိုတိုက်ကျွေး မွေးမြူကြလို့။ ဒီလောကကြီးရဲ့ အာရုံကောင်းဆိုး အမျိုးမျိုးကို သိမြင်အောင် သေချာပြသလို့ပါပဲ။
ချစ်သား , ချစ်သမီးတို့ မိဘကျေးဇူး အကျေဆပ်နိုင်တဲ့ နည်းလမ်းတွေကို ငါဘုရား ညွှန်ပြပါရစေ။သဒ္ဓါတရား မရှိတဲ့မိဘကို သဒ္ဓါတရားနဲ့ ပြည့်စုံအောင်။သီလမရှိတဲ့ မိဘကို သီလနဲ့ ပြည့်စုံအောင်။မပေးရက် , မလှူရက် နမြောဝန်တိုတဲ့မိဘကို စွန့်ကြဲပေးကမ်း လှူဒါန်းခြင်းနဲ့ ပြည့်စုံအောင်။ပညာဉာဏ် မရှိတဲ့ မိဘကို ပညာဉာဏ်နဲ့ ပြည့်စုံအောင်
ကောင်းစွာ နာယူ ဆောက်တည်စေမယ်။ လေးလေးနက်နက် သက်ဝင်စေမယ်။ ခိုင်ခိုင်ခံ့ခံ့ တည်တံ့မြဲမြံစေမယ် ဆိုရင်မိဘကျေးဇူးကို အကျေ ဆပ်ပြီးသား ဖြစ်သွားပါတယ်။ဒါဟာ ဘုရားဟော မူရင်း ပါပဲ။မိဘကျေးဇူးဆပ်တဲ့နေရာမှာလောကနည်းနဲ့ ဆပ်ခြင်းဓမ္မနည်းနဲ့ ဆပ်ခြင်းလို့ နှစ်မျိုး ရှိပါတယ်။
မိဘအတွက် အစားအသောက် , အဝတ်အထည် , နေအိမ်တိုက်တာ , ကားရထား စတဲ့ လူမှု အသုံးအဆောင် ပစ္စည်းတွေ ပြည့်စုံအောင် စီမံဖန်တီးပေးတာကို လောကနည်းနဲ့ ကျေးဇူး ဆပ်တယ်လို့ ခေါ်ပါတယ်။စိတ်ထားမတတ်တဲ့မိဘ စိတ်ထားတတ်အောင်..ကုသိုလ် နည်းပါးတဲ့ မိဘ ကုသိုလ် တိုးပွားအောင် ကူညီပံ့ပိုးပေးတာကို ဓမ္မနည်းနဲ့ ကျေးဇူး ဆပ်တယ်လို့ ခေါ်ပါတယ်။
တကယ်တော့လည်း ရှည်လျားလွန်းလှတဲ့ အစမထင် သံသရာမှာသူက မိဘဖြစ်လိုက် , ကိုယ်က မိဘဖြစ်လိုက်နဲ့ အပြန်ပြန် အလှန်လှန် ကျင်လည်နေကြရတာမို့ ဘယ်သူ့ကျေးဇူးကို ဘယ်သူက ကျေအောင် ဆပ်ပြီးပြီ ဆိုတာ ပုထုဇဉ်လောကမှာ လုံးဝ မရှိနိုင်ဘူး။
ဒါကြောင့် …ကျေးဇူးကျေတာ , မကျေတာကို အဓိက မထားဘဲ ” ကျေးဇူးဆပ်နေဖို့ အဓိက” လို့ နှလုံးသွင်းပြီးလောကနည်းနဲ့ရော ဓမ္မနည်းနဲ့ပါ မိဘကို အမြဲ ကျေးဇူး ဆပ်နေဖို့ပဲ အရေးကြီးပါတယ်။
မိဘကို ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာရော , စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပါ အဆင့်အတန်းမြင့်အောင် ကျေးဇူးဆပ်နေတဲ့ သားကောင်း , သမီးကောင်းရဲ့ ထံမှောက်ကို …ကံကောင်းခြင်း လက်ဆောင်တွေ ” ဝင်လာမစဲ တသဲသဲ ” ဆိုသလို အလုံးအရင်းနဲ့ ဝင်လာမှာကတော့ သေချာပေါက်ပါပဲ..။
ဆရာတော် အရှင်ဆန္ဒာဓိက ( ရွှေပါရမီတောရ )
← ပခုက္ကူတက္ကသိုလ် သင်္ကြန် ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွား၊အရပ်သားတွေပါလာ
မင်္ဂလာနှစ်ပတ်လည် (၉) လပြည့်သွားခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့ အောင်သူနဲ့ သရုပ်ဆောင် ပိုးအိအိခန့် →
ဘုရားစင်ပေါ်က ဘုရားပန်း မညိုးပါစေနဲ့ သောက်တော် ရေချမ်းလည်း မနွေးပါစေနဲ့
December 21, 2018 myanmarmagazine Comments Off on ဘုရားစင်ပေါ်က ဘုရားပန်း မညိုးပါစေနဲ့ သောက်တော် ရေချမ်းလည်း မနွေးပါစေနဲ့
ခြေညှိုးက ခြေမထက် ရှည်တဲ့သူတွေကို ဘာ့ကြောင့် လက်မလွှတ်သင့်တာလဲ ဆိုတာ
October 17, 2018 myanmarmagazine Comments Off on ခြေညှိုးက ခြေမထက် ရှည်တဲ့သူတွေကို ဘာ့ကြောင့် လက်မလွှတ်သင့်တာလဲ ဆိုတာ
မြန်မာ့သမိုင်းဝင် ပတ္တမြားငမောက် ဘယ်သူ့ဆီမှာလဲ ?
October 17, 2018 myanmarmagazine Comments Off on မြန်မာ့သမိုင်းဝင် ပတ္တမြားငမောက် ဘယ်သူ့ဆီမှာလဲ ?